Vaovao - CONVISTA novolavola ny valizy vavahady paride slide ho an'ny rafitra fantsom-pamokarana avo sy salantsalany 600 ka hatramin'ny 1000MW turbine etona supercritical (ultra-supercritical)
Tamin'ny volana aogositra 2018, CONVISTA dia namolavola tamim-pahombiazana ny valizy vavahady paride slide ho an'ny rafitra fantsom-pamokarana avo sy salantsalany turbine unit supercritical (ultra-supercritical) 600 hatramin'ny 1000MW.
1.It dia mandray rafitra fanamafisam-peo mihombo, miaraka amin'ny fifandraisana mihombo amin'ny lafiny roa.
2. Izy io dia mandray valizy bypass elektrika amin'ny fidirana sy fivoahana amin'ny fampifandanjana ny tsindry tsy mitovy amin'ny fidirana sy ny fivoahana.
3. Ny mekanisma fanidiana azy dia mandray ny firafitry ny takelaka misy takelaka roa. Ny famehezana valve dia avy amin'ny tsindry antonony fa tsy avy amin'ny hery mihetsika mekanika mihodina mba hisorohana ny valizy tsy hiharan'ny fihenjanana mampidi-doza mandritra ny fisokafany sy ny fanidiana azy.
4. Miaraka amin'ny fantsom-panafody matevina miorina amin'ny cobalt, ny tarehy famehezana dia misy fanoherana ny hafanana avo lenta, fanoherana ny harafesina, fanoherana ny abrasion, androm-piainana lava ary toetra hafa。
5. Mandalo fanoherana ny harafesina sy ny nitrogenization, ny valin'ny vatan-tsolika dia manohitra ny fanoherana ny harafesina, fanoherana ny abrasion ary ny famehezana boaty azo antoka.
6. Afaka mifanandrify amina fitaovana elektrika an-trano sy any ivelany isan-karazany izy mba hahatratrarana ny takiana amin'ny fanaraha-maso DCS ary hahatsapa ny asa lavitra sy eo an-toerana.
7. Hisokatra tanteraka na hakatona mandritra ny fiasana. Tsy tokony hampiasaina toy ny valizy mifehy.